Piers Morgan oo isbarbar-dhig layaab leh ku sameeyay Lionel Mess iyo Gary Neville – Gool FM
Piers Morgan oo isbarbar-dhig layaab leh ku sameeyay Lionel Mess iyo Gary Neville
Haaruun June 15, 2020
(England) 15 Juun 2020. Soo jeediyaha barnaamijka Good Morning Britain (Subax wanaagsan Britain) kaasoo ka baxa telefishanka ITV ee Piers Morgan ayaa aaminsan in kabtanka Barcelona ee Lionel Messi uu si xeelad ku dheehan tahay uga faa’ideystay maalmihii bandowga isagoo sheegay inuu u muuqaal ekaaday difaacii hore Manchester United ee Gary Neville.
Laacibka reer Argentina ayaa muuqaal cusub la soo laabtay markii dib loo amba qaaday ciyaaraha horyaalka La Liga, waxaana uu soo xiirtay garka oo sanadihii ugu dambeeyay astaan u ahaa.
“Waxaan rabaa inaan idin tuso wax cajiib ah oo aan habeenkaas arkay, Messi waxa uu iska soo xiiray garka, waana Gary Neville” ayuu Piers Morgan ku sheegay barnaamijka Good Morning Britain ee ka baxa ITV.
“Sidaas darteed, waxaad heysataa ciyaaryahan ka mid ah kuwa hibada ugu cajiibsan ee kubadda cagta leh, waana Lionel Messi.
“Markaan eeg, waxa uu isu baddelay Neville, ma aqaano siduu Neville dareemayo mar haddii uu Messi u ekaaday” ayuu Morgan kusii kaftamay.
Dhanka kale difaacii hore ee qaranka England ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay sawirka Messi oo uu ku dheggan yahay sawirkiisa xilligii uu u ciyaarayay Red Devils.
Neville ayaa sawirkaas soo raaciyay qoraal ahaa: “Sidaas darteed, siyaabo badan ayaan ugu ekahay”, waxaana ku raacay walaalkii Phil Neville oo ah tababaraha xulka qaranka hablaha ee England kaasoo qaybta araahda ku soo qoray “Waan kugu raacay”.
Lionel Messi ayaa gool dhaliyay, labo kalena caawiyay kulankii ay Barcelona 4-0 ku soo xaaqday kooxda Real Mallorca, waxaana kooxda horyaalka difaacaneysa ay labo dhibcood dhanka kala sarraynta kaga horreysaa kooxda ay xafiiltamaan ee Real Madrid.
Taageerihii soo dhex galay ciyaartii Barcelona iyo Real Mallorca ee habeenkii sabtida oo ka sheekeeyay qaabkii ay ugu suuro gashay inuu soo galo garoon taageerayaasha laga xiray
Wax badan ka ogow kulammada La Liga ee u harsan Barcelona iyo Real Madrid... (Taariikhaha & saacadaha)